Santiago Bernabeu Oo Dib U Habeyn Lagu Sameyn Doono, Iyo Afar Naqshadood Oo La Soo Bandhigay. - jornalizem
Santiago Bernabeu Oo Dib U Habeyn Lagu Sameyn Doono, Iyo Afar Naqshadood Oo La Soo Bandhigay.
Muddo badan ayaa la qarinayay naqashadaha cusub ee la qiimeynayo kuwaasoo lagu doonayo in midkood uu noqdo dib u dayactirka garoonka Santiago Bernabeu, lakiin waxaa ugu danbeyn afar naqshadood la soo bandhigay kulanka golaha guud ee Real Madrid, iyadoo madaxweynaha kooxda Florentino Perez uu kaga yaabsaday xunbaha ku jira golaha kuwaasoo aan ka warqabin naqshadahan wixii ka horeeyay shalayto.
Afarta naqshadood ee tartanka ku jira ayaa si aad ah loo ilaalinayay, waxaana loo ogolaa kaliya inay dad yar uun arkaan ka hor soo bandhigistoodii shalayto oo axad aheyd. Qofna ma awoodin wixii shalay ka horeeyay inuu sawir ka qaado madaama qolka ay yaaleen naqshadahan laga mamnuucay in lala galo kaamirooyin iyo taleefanada gacan qaadka.
Afarta naqshadood aee tartanka ku jira ayaa waxaa iska leh shirkadaha Amela-Populous, Moneo-Herzog & De Meuron, Norman Foster-Rafael de Lahoz iyo GMT Architekten-L35-Ribas.
“Sannad walba waxaan u dagaalanaa inaan banaanka soo dhigno kooxdeena, maalin walba ayaana ka shaqeynaaa. Haatan yoolkeena waa inaan horumarin ku sameynaa garoonka Santiago Bernabeu iyo adeegyada tababarka ee kooxda. Waxaan dooneynaa in labada ay noqdaa calaamad ka dhex muuqata Isboortiga” ayuu Florentino Perez u sheegay xubnaha kooxda.
“Afarta naqshadood waa kuwa hami gaar ah leh, mid walbaana waxa uu soo bandhigayaa in dib u habeyn lagu sameeyo garoonka iyo hadii ay macquul tahay in la weyneeyo baaxadiisa. Waxaan dooneynaa in garoonkeena uu noqdo mid ka mid ah dhismayaasha ka muuqda Madrid iyo caalamkaba.” ayuu hadalkiisa raaciyay madaxweynaha Real Madrid.